Kana kunobva shamwari, vabereki, Porn, kana Hollywood, isu tose tine ruzivo kwenhema misoro yedu nezvebonde. Luckily, tiri pano kubatsira kunyatsonzwisisa zvimwe zvikuru pusa ngano.
nhoroondo #1: Unogona kuudza munhu kuti ungazobhadhara munhu mboro ndeyokuteerera ake shangu saizi, nokuti sezvo shoko anoenda “kana ane tsoka hombe…”. Ndicho venhema. Hapana zvachose pasina kuwirirana pakati mboro kukura uye shangu saizi. Izvi anoenda kuti kukura ruoko uye nzeve saizi.
nhoroondo #2: The yakakura yemukomana, zvikuru kugutsikana mukadzi achagamuchira. nhema, saizi chaizvoizvo ane chokuita chitsama mafaro, naro kunyanya chete ine chokuita munhu aonekwe. The G-Spot iri masendimita maviri mukati nepanhengo uye musoro yemukomana kuti Zvinoitira nayo apo kusundira. Saizvozvo, mikuru mboro kazhinji unotipotsei G-Spot zvachose. Saka dzidziso, Kukura unoburuka kuti zvaunofarira kwete kugutsikana.
nhoroondo #3: Hazviiti kuti mukadzi pamuviri mwana achiri iye atova nepamuviri. nhema, akadana superfetation, Mukadzi anogona chaizvoizvo pamuviri apo pamuviri kunyange kashoma chaizvo.
nhoroondo #4: Marriage ichakanganisa hwako pabonde upenyu. Ndicho venhema. Sex, saizvozvo, zvakunowedzera varoorana. zvidzidzo Recent dzinoratidza kuti vakaroorana vane yepamusorosoro kugutsikana, edza zvakanyanya siyana munzvimbo, uye pabonde kakawanda.
nhoroondo #5: Vakadzi regai kurinda Porn. Funga futi. Kunyange zvazvo vakawanda kwete kuti vanobvuma, vakadzi tarisa zvizhinji Porn. Paaitsvakurudza kuchangobva, 85% Vakadzi akabvuma kuti wakati akatarisa Porn. Saka zvinoita sokuti vakadzi kunoirinda sewewo varume.
nhoroondo #6: hamungambovi pamuviri kana muchienda pabonde pane dziva kana uchipisa tabhu. Ongororo vakaedzwa kuti ari rinopisa tabhu kweinopfuura 30 maminitsi Anogona kudzikisa dzisingaoneki count; zvisinei, hapana chinhu mvura chero tembiricha kana makemikari hunhu kuti vachauraya kure dzisingaoneki. Kamwe urume anopinda nepanhengo, chinangwa chacho ndechokuti kuwana zai yokuti ambouisa, hapana achange kuamisa.
nhoroondo #7: Old vanhu havana pabonde. kunyange zvazvo chirwere, rufu nomukwanyina, divi Migumisiro nemishonga pakati nezvimwe zvinokonzera vanogona kuva chipingaidzo, zera hahungoshandi pabonde. Kurara pamwe kuri nokusingaperi-refu chinoumba evanhu kuti hakubvi pakutsvaga zera, Chimiro, utano, kana dzichipfekeka nemano. Saizvozvo, Ruzhinji rwevanhu kugara zvepabonde zvakanaka kupinda pakukwegura. Pamusoro paizvozvo, Kugara zvepabonde vakwegura vanogona chaizvoizvo kubatsira mupfungwa nomumuviri.